- ကလေးများအများဆုံးကွဲပြားခြားနားမန်များဆွဲရန်ကိုချစ် ကြောင်, ခွေးတွေ, ငှက်, ဖား။ သူတို့ရဲ့အမြင်မျိုးစုံ, သင်တိရိစ္ဆာန်များ၏နေရင်းဒေသများနှင့်အလေ့အထများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုပြောပြတစ်ချိန်တည်းမှာ, ထိုကဲ့သို့သောကျားအဖြစ်အချို့သောအသားစားအတူတူဆွဲရန်ကြိုးစားနိုင်ပါ။
သေးငယ်တဲ့ကလေးကငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးသူ, ထို့ကြောင့်အဘယ်သူမျှမပြုံးဖြဲဖြဲမေးရိုးနှင့်ချွန်ထက်ခြေသည်းကဲ့သို့ဖြစ်သင့်တယ် Picture ။ အလုပ်ရယူခြင်းမဟုတ်, လူတိုင်းအတွက်ကသူ့ဟာသူဆင်တူခဲ့သည်သို့မှသာတစ်ဦးခဲတံနှင့်အတူတစ်ဦးကျားဆွဲဖို့ဘယ်လိုသိတယ်။ ရဲ့ကအတူတူသင်ယူကြပါစို့
အလုပ်အဖြူရောင်စာရွက်တစ်ရွက်, တစ်ဦးခဲတံနှင့်ခဲဖျက်အဖြစ်အရောင်အဘို့အရောင်စုံခဲတံသို့မဟုတ် crayons လိုအပ်ပါတယ်။ သည်သူငယ်အတွက်အများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် - တိရစ္ဆာန်က၎င်း၏မွေးရာပါ connotation တွေ့သည့်အခါနောက်ဆုံးအဆင့်။
ကလေးသူငယ်အခနေဆဲသေးငယ်သည်မှန်လျှင်, သူကညာဘက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထုတ်ကိုဖွင့်လို့မရဘူး, သူသည်လျင်မြန်စွာအကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိခင်ကအမြဲတမ်း, အလုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်သင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးကျားထိုင်လျက်နှင့်ရပ်နေဆွဲရန်မည်သို့မည်ပုံနှင့်လိမ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးသားသူငယ်ကိုကိုယ်စားပြုဖို့တောင်းစေခြင်းငှါ - အလုပ်လုပ်ဖို့ options နှစ်ခုကြိုးစားပါ။
Kid ငါးနှစ်ပြီးသားတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဆွဲဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုသိမထားဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့တဖြည်းဖြည်းကလေးတစ်ဦးမှတစ်ဦးခဲတံဆွဲသင့်သော, တစ်ဦးနှုတျသီးကျားနှင့်အတူစတင်ရန်သင့်အားအကြံပေးအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ sequence ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ပထမတစ်ခုကရိုးရှင်းပြီးစက်ဝိုင်းဆွဲလေးအပိုင်းပိုင်းသို့ crosswise ကဝေဖန်လော့။
စက်ဝိုင်းခြမ်း pririsovyvat နားရွက်အနာဂတ်ကျားပြို။
မျက်နှာပေါ်မှာဆံပင်၏ outline ရဲ့အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်း။
အခုတော့တိရစ္ဆာန်၏ပင်စည်ရဲ့ width အထိမ်းအမှတ်တစ် trapezoid များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်နှစ်ခုလိုင်းများဆွဲအဖြစ်သရုပ်မှန်၏ခြေထောက်ချိတ်တွဲ။
ဒါဟာကို arc ပာယက်ဆွဲရန်အချိန်ပါပဲ။
ရှေ့ယက်အနီးရှိလိုင်းကိုင် - ကနောက်ဘက်၏မြင်ကွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
သေးငယ်တဲ့အဘို့အမှု - အနက်ရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်ခဲတံကို အသုံးပြု. အစင်းကျားဆွဲခြင်းနှင့်ဆေးသုတ်ရန်။
အမြီးနှင့်ဦးခေါင်းနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ် - ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိရစ္ဆာန်၏အခြေစိုက်စခန်းဆွဲပါ။ အသစ်ကပစ္စည်းများပြီးဆုံးရန်အနီအရောင်မှတ်သားပါလိမ့်မည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံသဏ္ဍာန်၏နှုတျသီးသတိပြုပါ, ဒါကြောင့်ကလေးသူငယ်အခအသေးစိတ်ကိုပျောက်ဆုံးအဆင်ပြေ dorisovyvat ဖြစ်လိမ့်မည်ပေးပါ။
ကြီးမားသောတိုက်ရိုက် muzzle နှင့်အသေးစားလိမ့်မယ် - - နားရွက်ဆွဲသုံးစက်ဝိုင်း၏ဦးခေါင်းတွင်။ အဆိုပါ tabs များပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ကြောင်းသူတို့အားပြုသည်, တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းရေးဆွဲရပါမည်။
တစ်ဦးနှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ် - ကျနော်တို့မျက်နှာပေါ်မှာဒဏ်ငွေအသေးစိတ်ထွက်ကောက်ဖို့ဆက်လက်။ နှစ်ဦးကျန်ရှိခြေထောက်ဟာသူတို့ပေါ်မှာတည်ရှိနေကြသည်အဖြစ်ထားပြီး, ပန်းချီ, အဲဒီနောက်ကလေးကသူဘာအချိုးအစားသဘောပေါက်လာသောအခါတစ်ဦးကျားဆွဲရန်လွယ်ကူပါလိမ့်မည်ထက်အနည်းငယ်လျော့နည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျယ်ပြန့် strips တွေ - လာမယ့်ခြေလှမ်းကဒီဂုဏ်ထူးကျားဆွဲလိမ့်မည်။ သူတို့ကအညီအမျှခန္ဓာကိုယ်, ဦးခေါင်း, ခြေထောက်နှင့်အမြီးကိုကျော်ဖြန့်ဝေရမည်ဖြစ်သည်။
ဒီနေရာတွင်ရသင့်ပါတယ်တဲ့ပုံကြမ်းပါပဲ။ အဆိုပါချွတ်နှင့်အမြီးအနက်ရောင်များ၏အစွန်အဖျား Paint ။
ယခုမှာအကြှနျုပျတို့အလိမ္မော်ရောင်ခဲတံ၏လက်နှင့် ယူ. သင်လိုအပ်သမျှကိုဆေးထိုးခြင်း, အနှုတ်ခမ်းမွေးနှင့်ခြေထောက်များအဖြူကနျြရစျသငျ့ကွောငျးမမေ့မလြော့ပါ။
သူငယ်တန်းအတွက်တစ်နေ့တာ Mode ကို
ကလေးတွေအဘို့ကို Magic လှည့်ကွက်
ပယင်း Heard ဂျော်နီ Depp ရဲ့ချေမှုန်းရေးကိုအတည်ပြုသူနှစ်ဦးမျက်မြင်သက်သေများကိုတွေ့
Antonovka - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ဆောင်းဦးရာသီ outerwear 2013
Reedfish - ထိုငါးမွေးကန်များတွင်အကြောင်းအရာ
ညဦးယံအချိန်တွင်ဆင်မြန်း - ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ် 2014
တစ်ဦး elastic တီးဝိုင်းနှင့်အတူ Polusolntse စကတ်
ဂေါက် - ရိုးရာကုစား၏ကုသမှု